के.पी. ओली प्रधानमन्त्री हुन् की हास्य कलाकार ? - Sarangkot NewsSarangkot News
प्रधानमन्त्री देशका एक मात्र कार्यकारी प्रमुख । आम जनताका अभिभावक । कानुनका पालक । पुरै मुलुक चलाउने जिम्मेवार शासक –प्रशासक । मुखकै आदेश कानुन हो । प्रधानमन्त्रीले वोलेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन्छ मानौं प्रधानमन्त्रीको वोली वोली मात्र होइन आदेश हो जसको पालना लगभग अनिवार्य गरिन्छ।
हो त्यस्तो गौरवमय पदमा पदासिन व्यक्तिका हरेक वोली वोलीमा अर्थ खोजिन्छ, शव्द शव्दमा देश र जनताका प्रतिनिधित्व अपेक्षा गरिन्छ । विपत्ति र महामारीमा प्रधानमन्त्रीको वोली राहत र अमृतका घैला मानिन्छ। केहि अरव रुपैयाँ देश र जनहितमा खर्च गर्न जिब्रोमै आदेश झुण्डिएको हुन्छ । वेष्ट मिनिस्टर पद्दति स्वीकार गरेको देश नेपालले सर्वेसर्वा मानेका सर्वोच्च प्रधानमन्त्री पद यतिखेर होचिएको, थेचिएको महसुस गराउँदैछ ।
गौरव र गरिमाको पदमा आसिन व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदको महत्व, मर्म र अस्तित्व नै धमिलो र हल्का फुल्का वनाउँदै लगेका छन् । प्रधानमन्त्रीको मुखबाट राष्ट्र बोल्ने हो, राष्ट्रियता वोल्ने हो झण्डै ३ करोड जनता बोल्ने हो । दलबाट जिते पनि प्रधानमन्त्री पार्टीको नेता होइन ३ करोड जनता भएको देश नेपालको नेता हो । प्रधानमन्त्री पात्र मात्र हैन प्रवृत्ति हो त्यसैले सवै जनताको मन मस्तिष्कमा उभिएर निस्फिक्री छाती पारेर सकल आम जनतालाई समान व्यवहार र अधिकार दिने महा मानव हो प्रधानमन्त्री ।
यतिखेर हामी आम मानिसहरु हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री भन्दा एउटा हास्य व्यङ्य कलाकार वा टिप्पणी गर्न राम्रो दख्खल भएको टिप्पणीकारको भूमिकामा देखिरहेछौं । हरेक दिन जसो काँचको पर्दामा आएर नन्नी मुन्नीका कथा सुनाएर ठट्टा गर्छन् प्रधानमन्त्री जन्मजात शत्रुलाई झै सहकर्मीहरुलाई धारेहात लगाएर उछितो काढ्छन् प्रधानमन्त्री, युट्युवमा छाउने पुण्य गौतम र मुकन्दे जस्तै शैलीले कत्लेआम पार्ने गरी नृसंस हत्या प्रयास गर्छन शब्द वाणहरुले ।
टिभी र मोवाइलका स्क्रिनहरुमा छाइरहने हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रका नाममा दिइने सन्देश गाली सन्देश जस्तै भएको छ । देश र जनतालाई राहत सन्देश, विकास र निकासका सन्देशको अपेक्षा गर्नु अव व्यर्थ जस्तै भइसकेको छ । भाषणमा वहकिदै गर्दा आफ्नै हुर्मत आफैले लिँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चालै पाउँदैनन् ।
राष्ट्रियताका वखान गरेर नथाक्ने उनि पटक पटक चुकिसकेका छन् । झुटका सम्राट नै वन्ने क्रममा रहेका उनका दर्जनौ श्रृंखला पुष्टि भइसकेका छन्। निर्वाचन आयोग, अख्तियार, न्यायलयका स्वयम् प्रवक्ता वनेर निर्णय नै नहुँदै स्वघोषणा गर्छन् र। प्रभावित पार्ने दुस्साहस गर्दैछन् हाम्रा प्रधानमन्त्री ।
प्रधानमन्त्रीले कति वोल्ने ? के वोल्ने ? कहिले वोल्ने ? कहाँ वोलने भन्ने स्पष्ट एकिन हुनुपर्छ। सटिक र अर्थपूर्ण वोल्ने, वोलेका कुराहरुलाई पुष्टि गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सक्ने मात्र वोल्नु पर्छ । तर हाम्रा प्रधानमन्त्री वोलेको भाषण हेर्ने हो भने लाग्छ उनि कुनै विपक्षिमा रहेका दलको भातृ संगठनका नेताले सरकारको खिलाफमा सत्तो सराप गरे झै महसुस गराउँछ ।
केहि दिन अघि उनले भनेका थिए नेपाललाई विश्वले चिन्छ । भारतका हरेक प्रान्त ले चिन्छ । सुशासनमा नेपाल एक नम्वर मैले बनाएको छु उज्यालो नेपाल मैले बनाएको हो कुलमानले होइन खिया लागेका दुई वटा नटवल्ट खुस्केर गए, भेट्नु कुहिएर झेरका दुइटा फलले रुखै मै हु भने झै को आरोप नेपाल प्रचण्ड लाई लगाएर यति छुद्र र तुच्छ टिप्पणी केपी ओलीले गरेका छन् कि मानौं उनि प्रधानमन्त्री हैनन् एक पराजित विक्षिप्त कार्यकर्ता हुन् झै आभाष दिलाउँछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालका अरु पूर्व प्रधानमन्त्री वाट राम्रा कुरा सिक्न सक्थे । गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुशिल कोइराला, लोकेन्द्र वहादुर चन्दले कहिल्यै अशिष्ट र तुच्छ बचन वोलेनन् । प्रतिपक्षले सडकका रेलिङ, बाटो डिभाइडर, तोडफोड गर्दा पनि सहनसिल अभिव्यक्ति दिएर विवाद समाधान गरेका प्रधानमन्त्रीहरुको गौरव गरिमा समेत माटोमा मिलाउँदैछन् केपी शर्मा ओलीले ।
उख्खान र तुक्काले वाण वर्साएर तिखा आलोचना गर्दैमा तपाईलाई सफल र अव्वल भनिदैन प्रधानमन्त्री ज्यू । पृथ्वी सानो छ घुमिरहन्छ ग्रह सधै वलवान हुँदैनन् र सडक, गाउँ वस्तीका जनता सवै भेडा वाख्रा पनि हैनन् तपाईले हरियो घाँस देखाउँदैमा पछि लाग्ने अवस्था पनि अव रहेन । आसपासका सल्लाहकार र सचिवालयका चण्ड मुण्डले सहि सल्लाह नदिएका हुन या तपाई स्वयम् ले सल्लाह लिने आवश्यकता नठान्नुभएको हो त्यो तपाइकै सिरोभर जे होस् तपाईका कदम देश र जनहितमा स्थापित हुन सकेन ।
घर भित्रका झगडा मिलाउन नसक्दा गाउँ नै डढेलो लगाइदिनुभयो । त्यो डढेलो ले बस्ती नै सखाप पार्दै छ । कोरोनाको उपचार र निःशुल्क पिसिआर गर्न नसक्ने सरकराले २० औं अर्वको खोलो बगाएर चुनाव गर्न घोषणा गरेको छ । पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाएर देशलाई निकास र जनतालाई विकास दिन पठाइएको जनमतलाई धज्जी उडाइदिएका छौ अझै पनि वहुमत पाउने विश्वास रहेको बताउदै छौ के जनता तपाइका कोटका खल्तीका खाना हुन् जति खेर भोक लाग्यो झिक्यो खायो गर्ने ?
प्रधानमन्त्री पदमा रहुञ्जेल सम्म पदको गरिमा राखौं । पाटीलाई वहुमत केन्द्रीय सदस्य बनाउने बहानामा शिक्षक, कर्मचारीलाई वलिको वोका नवनाएकै राम्रो । अरुलाई उख्खान तुक्काको वाण प्रहार गर्ने वानीले २/४ सयले ताली पट्काए भन्दैमा नहौसिनुहोस् प्रधानमन्त्री ज्यू तपाई हास्य कलाकार हैन नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो । जय होस् ।